I-Tigh Cottage Isle of Seil - isitofu esivuthayo sezinkuni - I-Airbnb
I-Tigh Cottage Isle of Seil - isitofu esivuthayo sezinkuni
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Alison & Thomas
U-Alison & Thomas Ungumbungazi ovelele
Itholakala e-Isle of Seil enhle e-Argyll, exhunywe ezweni elikhulu ngeBhuloho elidumile phezu kwe-Atlantic, ikotishi lethu lisendaweni enokubona nokukwenza. Ukusuka ekuhambeni, ukuya ohambweni lwesikebhe, iziqhingi ongavakashela kuzo, i-kayaking, iminyuziyamu, izinqaba namabhishi, kukhona okuthile kuwo wonke umuntu.
Ikotishi linamagumbi okulala amabili, igumbi lokuhlala elinendawo yokudlela, ikhishi lepulani elivulekile kanye negumbi lokugezela elineshawa elikhulu lokuhamba ngezinyawo.
Kukhona isitofu sokhuni esincane esivuthayo egumbini lokuhlala esinezinkuni ezinikezwe phakathi nesikhathi sokuhlala kwakho (vele ubuze ukuthi udinga okwengeziwe). Igumbi lokugezela nekhishi linokushisa okungaphansi.
I-Fiber optic broadband, i-Freeview 32" TV. I-Amazon Firestick inokufinyelela ku-Amazon Prime, Youtube, BBC Iplayer, Now TV. (Ukufinyelela ku-Netflix ne-Disney+ usebenzisa izivakashi ukungena kwakho. )
Unengadi yakho ebiyelwe enotshani obuncane kanye nompheme kodwa sicela uqaphele ukuthi sidinga ukudlula ukuze sifike endlini yethu.
Kukhona umgwaqo omkhulu owabelwana ngawo.
Izinja ezifika kwezi-3 zamukelekile.
I-TV engu- 32" ene-I-Amazon Prime Video
4.98 · 169 okushiwo abanye
Sitholakala edolobhaneni lase-Balvicar elinesitolo sedolobhana esigcwele iminyango embalwa phansi kanye nenkundla yegalofu okuhamba imizuzu embalwa ukusuka lapho. Kunokuningi kokuhamba e-Seil, izinkampani ezimbili zohambo lwesikebhe, isikole se-kayak nama-pubs amabili.
Ibungazwe ngu-Alison & Thomas
Alison is a front of house manager in a 4 star hotel, and Thomas works in a marina and boatyard. We moved to Isle of Seil in 2014.
Ngenxa ye-Covid-19, nokugcinana siphephile, ngeke sihlangane futhi sikubingelele kodwa siyohlala kwamakhelwane uma kuba nezinkinga.
UAlison & Thomas Ungumbungazi ovelele